Nabaddoon lagu dilay magaalada Balad-xaawo | KEYDMEDIA ONLINE
Nabaddoon lagu dilay magaalada Balad-xaawo
Nabaddoon kamida kuwa ugu caansan magaaĺada Balad-xaawo ee gobolka Gedo ayaa lagu dilay halkaas, waxaana la xaqiijiyay geerida Nabad-doonka.
BALADXAAWO - Nabaddoon caan ka ahaa magaalada Baladxaawo ayaa xalay la dilay, koox hubaysan ayaa weerar ku dilay Nabaddoon Maxamed Xaashi Diriye xili uu kasoo baxay salaadda Cishaha, waxaana Nabaddoonku uu kamid ahaa Odoyaasha dhaqanka ee laf-dhabarta u ah nabada Gobolka, gaar ahaan Degmada Beled-waawo.
Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana goobta uu falku ka dhacay gaaray ciidanka dowladda, kuwaasi oo howlgallo ka ka sameeyay meesha uu dilku ka dhacay iyo xaafadaha kale ee ku xeeran.
Dilka Nabaddoonada iyo wax garadka xilligan oo kale aad ayuu usoo bataa, maadaama lagu jiro marxalad kala guur ah, koox kasta oo u hanqal taageysa xil waxa ay raadsataa Nabaddoon si ay jaranjarada usoo fuusho, raadinta Nabaddoonada cusub inta lagu guda jiro waxaa la isku dayaa in meesha laga saaro kuwii hore, in la dilo xitaa haddii ay noqoto waa la khaarajiyaa.
Kooxda Al-Shabaab iyagana waxay xoogga saaraan sidii ay qeyb uga qaadan lahaayeen doorka Nabaddoonada iyagoo doonaya in ay ku jiraan meel kasta ayey Nabad-doonada ugu hanjabaan dil ama xogta dadka wax doonka ah ayey ugudbiyaan si qofka looga sii war qabo inta uusan xil doonan.